မိဘအုပ်ထိန်းသူများ သတိပြုနိုင်ကြစေဖို့ – WunYan
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် မြန်မာမိန်းကလေးနှစ်ဦး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အထောက်အထားမဲ့ ၀င်ရောက်လာကာ ထိုင်း – မလေးရှားနယ်စပ်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မယ်ဆိုင်မြို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်သို့ရောက်ရှိနေသဖြင့် ခေတ္တခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားပြီး လိုအပ်သည်များအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လာရောက်လွှဲပြောင်းခေါ်ဆိုပါရန် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ 191 ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာချီလိတ်မြို့အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုင်မြို့ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ CNCMC သို့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၀ ရက် ည ၇း၅၀ မိနစ်ခန့်က ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလာသည့်အတွက်
CNCMC လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဖြိုးရှိန် ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးစည်သူမောင် ၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းနိုင်ဦးတို့မှ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့စိတ် ၁ ( တာချီလိတ်) မှ တပ်ဖွဲ့စိတ်မှူး ရဲမှူးရင်ရင်အေး ထံ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းကာ မယ်ဆိုင်မြို့ 191 ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ည ၈ နာရီတွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး အဆိုပါ မိန်းခလေးငယ်နှစ်ဦးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့စိတ်မှူး ရဲမှူးရင်ရင်အေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ အဆိုပါမိန်းခလေးငယ်နှစ်ဦးအား စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ ၄င်းတို့နှစ်ဦးသည် ညီအမအရင်းများ ဖြစ်ကြပြီး မအေး …………… ( ၁၅ နှစ် ) နှင့် မခင်…………. (၁၃ နှစ် ) ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ၄င်းတို့ ငယ်စဉ်ကပင် မိဘနှစ်ပါးမှာ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲသွားကာ နောက်အိမ်ထောင်များ အသီးသီးပြုကြပြီး ၄င်းတို့ညီအမနှစ်ဦးမှာ တာချီလိတ်မြို့တွင် ဖခင်နှင့်နေထိုင်ကာ မိခင်မှာမူ ထိုင်း-မလေးရှားနယ်စပ်ရှိ ဖါ့တိုက်မြို့တွင် နေထိုင်ပါကြောင်း ၊
၄င်းတို့အနေဖြင့် မူလတန်းအဆင့်ထိသာစာသင်ခဲ့ရပြီး ယခုအခါ နှစ်ဦးလုံးကျောင်းထွက်ထားရပါကြောင်း ၊ ဖခင်နှင့်နေထိုင်ရာတွင် မိထွေးနှင့်လည်းအဆင်မပြေ ၊ မိခင်ကိုလည်း သတိရသဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ ရက် ညနေ ၃နာရီခွဲခန့်တွင် ဖခင်မသိအောင် နေအိမ်မှ ခိုးထွက်လာပြီး ထိုင်းဖက်သို့ကူးလာခဲ့ပါကြောင်း ၊ ၄င်းတို့အိမ်မှထွက်လာသည်ကို မိခင်မှလည်း မသိသလို မိခင်နေထိုင်ရာမြို့ကိုလည်း တခါမှမရောက်ဖူးပါကြောင်း ၊
သို့ဖြင့် မယ်ဆိုင်မြို့ အဝေးပြေးကားဂိတ်တွင် ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေရာမှ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားကာ ယခုညပိုင်းတွင် မြန်မာဖက်မှ တာဝန်ရှိသူများထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့နောက် တပ်ဖွဲ့စိတ်မှူး ရဲမှူးရင်ရင်အေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ၄င်းမိန်းခလေးငယ်နှစ်ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအာ …….. အား ဆက်သွယ်ခေါ်ယူပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင် ယခုလိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးများ တရားမ၀င်သွားရောက်မှုဖြင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ ၊ လူကုန်ကူးခံရမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကြိုးများအား ပညာပေးဆွေးနွေးကာ မိဘများအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏သားသမီးများအား မိဘ၀တ္တရားနှင့်အညီ ရင်အုပ်မကွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ၊ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အသိပညာပေးကာ မိန်းခလေးငယ်နှစ်ဦးအား မိဘအုပ်ထိန်းသူထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Credit : မောင်ယဉ်ကျေး
ဆယျကြျောသကျရှယျ မွနျမာမိနျးခလေးနှဈဦး ထိုငျးနိုငျငံအတှငျး အထောကျအထားမဲ့ ဝငျရောကျလာကာ ထိုငျး – မလေးရှားနယျစပျသို့ ဆကျလကျထှကျခှါရနျရညျရှယျခကျြဖွငျ့ မယျဆိုငျမွို့ အဝေးပွေးကားဂိတျသို့ရောကျရှိနသေဖွငျ့ ခတ်ေတချေါယူထိနျးသိမျးထားပွီး လိုအပျသညျမြားအား ဆကျလကျ ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ လာရောကျလှဲပွောငျးချေါဆိုပါရနျ ထိုငျးနိုငျငံ မယျဆိုငျမွို့ 191 ရဲတပျဖှဲ့မှ တာခြီလိတျမွို့အခွစေိုကျ ထိုငျးနိုငျငံမယျဆိုငျမွို့ရောကျ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအား ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးနှငျ့ စစေ့ပျညှိနှိုငျးရေးကျောမတီ CNCMC သို့ ဖဖေျေါဝါရီ ၁၀ ရကျ ည ရး၅၀ မိနဈခနျ့က ဆကျသှယျအကွောငျးကွားလာသညျ့အတှကျ
CNCMC လုပျငနျးကျောမတီ ဥက်ကဌ ဦးအောငျဖွိုးရှိနျ ၊ အတှငျးရေးမှူး ဦးစညျသူမောငျ ၊ အဖှဲ့ဝငျ ဦးထှနျးနိုငျဦးတို့မှ လူကုနျကူးမှုတားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့၊ တပျဖှဲ့စိတျ ၁ ( တာခြီလိတျ) မှ တပျဖှဲ့စိတျမှူး ရဲမှူးရငျရငျအေး ထံ ဆကျသှယျညှိနှိုငျးကာ မယျဆိုငျမွို့ 191 ရဲတပျဖှဲ့ထံ ည ၈ နာရီတှငျ သှားရောကျတှဆေုံ့ပွီး အဆိုပါ မိနျးခလေးငယျနှဈဦးအား မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလညျချေါဆောငျလာခဲ့ကွပါသညျ။
ထို့နောကျ လူကုနျကူးမှုတားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့ တပျဖှဲ့စိတျမှူး ရဲမှူးရငျရငျအေးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားမှ အဆိုပါမိနျးခလေးငယျနှဈဦးအား စဈဆေးမေးမွနျးရာ ၎င်းငျးတို့နှဈဦးသညျ ညီအမအရငျးမြား ဖွဈကွပွီး မအေး …………… ( ၁၅ နှဈ ) နှငျ့ မခငျ…………. (၁၃ နှဈ ) ဖွဈပါကွောငျး ၊ ၎င်းငျးတို့ ငယျစဉျကပငျ မိဘနှဈပါးမှာ အိမျထောငျရေးပွိုကှဲသှားကာ နောကျအိမျထောငျမြား အသီးသီးပွုကွပွီး ၎င်းငျးတို့ညီအမနှဈဦးမှာ တာခြီလိတျမွို့တှငျ ဖခငျနှငျ့နထေိုငျကာ မိခငျမှာမူ ထိုငျး-မလေးရှားနယျစပျရှိ ဖါ့တိုကျမွို့တှငျ နထေိုငျပါကွောငျး ၊
၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ မူလတနျးအဆငျ့ထိသာစာသငျခဲ့ရပွီး ယခုအခါ နှဈဦးလုံးကြောငျးထှကျထားရပါကွောငျး ၊ ဖခငျနှငျ့နထေိုငျရာတှငျ မိထှေးနှငျ့လညျးအဆငျမပွေ ၊ မိခငျကိုလညျး သတိရသဖွငျ့ ၂၀၁၉ခုနှဈ ဖဖေျေါဝါရီလ ၁၀ ရကျ ညနေ ၃နာရီခှဲခနျ့တှငျ ဖခငျမသိအောငျ နအေိမျမှ ခိုးထှကျလာပွီး ထိုငျးဖကျသို့ကူးလာခဲ့ပါကွောငျး ၊ ၎င်းငျးတို့အိမျမှထှကျလာသညျကို မိခငျမှလညျး မသိသလို မိခငျနထေိုငျရာမွို့ကိုလညျး တခါမှမရောကျဖူးပါကွောငျး ၊
သို့ဖွငျ့ မယျဆိုငျမွို့ အဝေးပွေးကားဂိတျတှငျ ဝဲလညျလညျဖွဈနရောမှ ထိုငျးရဲတပျဖှဲ့မှ ချေါယူထိနျးသိမျးထားကာ ယခုညပိုငျးတှငျ မွနျမာဖကျမှ တာဝနျရှိသူမြားထံပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးလိုကျခွငျးဖွဈပါကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
ထို့နောကျ တပျဖှဲ့စိတျမှူး ရဲမှူးရငျရငျအေးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက ၎င်းငျးမိနျးခလေးငယျနှဈဦး၏ ဖခငျဖွဈသူ ဦးအာ …….. အား ဆကျသှယျချေါယူပွီး တဈဖကျနိုငျငံတှငျ ယခုလိုဆယျကြျောသကျရှယျလေးမြား တရားမဝငျသှားရောကျမှုဖွငျ့ကွုံတှရေ့နိုငျသညျ့ အန်တရာယျမြား ၊ လူကုနျကူးခံရမှုနှငျ့ ကွုံတှရေ့ပါကဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ ဆိုးကွိုးမြားအား ပညာပေးဆှေးနှေးကာ မိဘမြားအနဖွေငျ့လညျး မိမိတို့၏သားသမီးမြားအား မိဘဝတ်တရားနှငျ့အညီ ရငျအုပျမကှာထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေး ၊ ပွုစုပြိုးထောငျရေး အသိပညာပေးကာ မိနျးခလေးငယျနှဈဦးအား မိဘအုပျထိနျးသူထံ ပွနျလညျလှဲပွောငျး ပေးအပျခဲ့ပါသညျ။
Credit : မောငျယဉျကြေး